Etu ị ga-esi si OS X Yosemite laghachi OS X Mavericks | Esi m mac
Jordi Gimenez | | Mac OS X, OS X Mavericks, OS X Yosemite, Nkuzi
Ajụjụ ọzọ a na-ajụkarị na weebụ bụ nke Kedụ ka m ga - esi gbanye OS X Mavericks mgbe akwalite OS X Yosemite?
Nke a bụ ajụjụ na nwere ọtụtụ azịza na ọtụtụ ụzọ iji mezuo ya. Ihe kachasị dị mfe ma dị nchebe na ịchọrọ ịlaghachi na OS X Mavericks site na Mac gị, bụ ịnweta ihe nkwụnye OS X Mavericks mbụ na pendrive ma ọ bụ SD ma si otu a mee nhicha dị ọcha OS X na igwe anyi.
Ọ bụrụ na anyị enweghị onye nrụnye anyị nwere ike ịnweta Mac nke dị na ụdị nke OS X Mavericks ma ọ bụ chọọ ya na net wee budata ya na Pendrive / SD, mana nke ikpeazụ anyị ga-akpachara anya n'ihi na ọ ga-ekwe omume na enwere ọdịda ma ọ bụ ezughi oke. Ọ kachasị mma ịchọrọ Mac na enyi gị ma ọ bụ jụọ onye nwere nke mbụ na Pendrive maka onye nrụnye. Ọ bụrụ na anyị enweghị nhọrọ nke ịnweta nke ọ bụla n'ime ihe a, gaa n'ihu na-agụ ma chọpụta ihe ahụ usoro site na nbudata WiFi.
Tupu ịmalite na nkuzi a nke na-enye ohere nbudata site na WiFi nke nwa amaala OS X nke Mac Ekwadoro m nwụnye na USB ọzọ n'ihi na ọ bụ ihe kachasị nchebe ma nwee ntụkwasị obi. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnwale nhọrọ a iji wụnye OS X Mavericks na Mac gị, anyị ga-ahapụ ya, mana tupu ị rituo azụmaahịa M na-adụ gị ọdụ ka ị gụọ nkuzi niile tupu oge a ma n'ụzọ dị otú a ghọta nzọụkwụ.
1 Nzọụkwụ mbụ dị ka ọ dị na mbụ: ndabere
2 Anyị malitere usoro nke nbudata OS X Mavericks
Nzọụkwụ mbụ dị ka ọ dị na mbụ: ndabere
Nke a bụ ihe dị ezigbo mkpa iji zere ịhapụ ihe ọ bụla dị mkpa ma yabụ anyị na-akwado mee nkwado ndabere na Akụrụngwa Oge ma ọ bụ ebe ọ bụla anyị chọrọ. Ọ bụrụ na ị nwere diski ike a raara nye naanị maka nkwado ndabere gị, ka mma, ebe ọ bụ na ị ga - ejide n'aka na ị gaghị ehichapụ ya n'ọnọdụ ọ bụla ọbụlagodi na anyị ga - eme ka diski diski Mac ahụ.
Anyị ekwesịghị ida data ọ bụrụ na anyị emee usoro a nke ibudata OS X site na WiFi, mana ọ ga-adị mma ka ịnwe nnomi ndabere mgbe anyị jikọtara ihe ndị a ma ọ bụrụ na ijiji.
Anyị malitere usoro nke nbudata OS X Mavericks
Eziokwu ọzọ dị mkpa iburu n’uche bụ na ọ bụrụ na Mac anyị nwere OS X Mountain Lion dị ka ọkọlọtọ, mgbake ga-etinye OS X Mountain Lion na igwe, na-abanye na akaghị ebe ọ bụ na ị gaghị enwe ike ịwụnye OS X Mavericks n'ihi na ụdị nke ugbu a bụ Yosemite, yabụ ọ bụrụ na Mac gị ị zụrụ ya na-enweghị isi iyi OS X Mavericks Ga-abanye na ụzọ Pendrive iji mepụta nrụnye nke OS X. Ọ bụrụ na Mac gị nwere Mavericks site na mmalite ị nwere ike ịga n'ihu.
Ugbu a, mgbe anyị nwere data anyị n'enweghị nsogbu ma anyị doro anya na a ga-etinye OS X Mvericks, ihe anyị ga-eme bụ ịmalitegharị kọmputa ahụ na tupu ụda ụda mmalite, anyị na-ejide igodo ahụ Alt + Iwu + R.. N'ụzọ dị otú a, ihe anyị ga-emezu bụ na Mac anyị na-abanye na ọnọdụ Iweghachite ozugbo na anyị ga-ahụ ụdị okirikiri nke Mac na-egosi mgbe ihe na-ebudata, n'okpuru ederede na-akọwa na sistemụ na-agbake na netwọkụ. Ugbu a, ọ ga-adabere na njikọ anyị otu ọsọ ọsọ nke nbudata nke OS X Mavericks na-ewere ọnọdụ.
Ozugbo nbudata nke OS X site na WiFi agwụla, Mac na-enye anyị ohere nke ịrụ nhicha dị ọcha ma ọ bụ imelite n'elu OS X Yosemite. Ọ bụrụ na anyị achọghị imelite ọcha Naanị anyị ga-pịa ịwụnye na OS X Mavericks a ga-arụnyere ozugbo na nke ugbu a, na-edebe ntọala niile anyị nwere na Mac anyị.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ imelite site na-eme a ọkọ echichi site na iwepu nhazi ochie na izere njehie ndị nwere ike ime (nke a bụ nhọrọ anyị na-akwado) anyị ga-abanye na nhọrọ ahụ Uru diski ma hichapụ. Ozugbo ehichapụrụ ọdịnaya nke diski ike ebe anyị nwere Yosemite arụnyere, anyị na-agaghachi wee pịa Tinyegharịa y Gaa n’ihu
Nkọ! Ugbu a aka chere ka usoro a gwụ na-enwe OS X Mavericks na Mac.
Maka ndị ọrụ ahụ Ha enweghị OS X Mavericks mgbe ha zụtara Mac Usoro a anaghị arụrụ ha ọrụ ma yabụ ịkwesịrị ịnwe ihe nrụnye na pendrive iji mezuo downgrade gị. Anyị na-ahapụ njikọ nke otu wụnye site ọkọ OS X Mavericks na USB.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac OS X » OS X Mavericks » Etu ị ga-esi si OS X Yosemite laghachi OS X Mavericks
My MacBook Pro nwere Mavericks arụnyere na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, otu usoro ha na-egosi na ihe wụnye m bụ Yosemite. Iji laghachi Mavericks m ga-agbanye usb. Ihe m hụrụ bụ na ụfọdụ n'ime usoro ndị m mere mgbe m wụnye Yosemite ma laghachi na Mavericks, na nkebi nke mgbake OSX furu efu, ọ funari.
Enwere m olileanya na ha ga-ahapụ ụlọ ọrụ Yosemite siri ike n'oge na-adịghị anya nakwa na ọ nweghị nsogbu.
Jorge Paez kwuru dijo
Mmadu enwere ike igwa m ebe m ga enweta ndi Mavericks? Daalụ
Zaghachi Jorge Paez
Mavericks adịghị maka nbudata ma ọ bụ zụta dịka ọ bụ nsụgharị n'efu. Ọ bụ ya mere ọ bụrụ na kọmputa gị sitere na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na Mavericks, ọ bụrụ na ịmalitere kọmputa ahụ na ntanetị mmalite (bido site na ịpị CMD + ALT + R) ị ga-enwe ike iweghachite Mavericks mbụ gị dịka ọ sitere na ụlọ ọrụ. Ọ bụrụ na m hụrụ gị na Mountain Lion ma ọ bụ ọdụm, otu ihe ahụ na-eme. Ọ bụrụ na ị nwere DVD, ndị a bụ ndị ị kwesịrị iji maka nke ahụ. Mgbe nke ahụ gachara site na 10.6 ị nwere ike ịwụli 10.9. Amaghị m ma ọ bụrụ ruo 10.10, ejighi m n'aka ebe ahụ. Mana Apple ka putara Mavericks mere Mountain Odum efu ma ya mere, ha gaara eme otu ihe ugbu a.
Zaghachi Francisco López
Na net ị pụrụ ịchọta OS X Mavericks, ọ bụrụ na ị na-ele anya a nta ị ga-ahụ ya n'agbanyeghị na ọ bụghị eze na Apple website.
Zaghachi Jordi Giménez
Enwere ike ihichapụ data gị ma ọ bụrụ na ịmee usoro a?
Ya mere ọ bụrụ na ihe m chọrọ bụ ịlaghachi ọdụm ugwu, m na-eme otu usoro ahụ? Ọ dịghị mgbe m wụnye mavericks. Ọ ga-amasị m ịlaghachi na ọdụm ugwu, amaghị m ma m ga-enweta ya n'ụzọ a.
Ndewo Angie, ụkpụrụ na-eso usoro ndị a ma ọ bụrụ na ọ ga-arụnyere na Mac ML gị ebe ọ na-etinye ụdị mbụ nke Mac gị.Ekele i nwere ike ịgwa anyị ma ọ rụọ ọrụ.
Sebastian Vasquez nwere ike dijo
Ndewo, agbasoro m usoro ahụ na-enweghị ihichapụ ozi dị na diski ike dị na yosemite ahụ, ọ na-agwakwa m na enweghị m ike ịwụnye mavericks n'ihi na e nwere nsụgharị ọzọ na diski
Zaghachi Sebastian Vasquez
Marcelo Moreno onye dobere ihe oyiyi dijo
Ezigbo Jordi. Agbasoro m usoro gị ma ọ bụ na-erughị (M mere a maverick boot disk na ebudatara ya site na apụl na ebe nrụọrụ weebụ mgbe m wụnye ya ọzọ) ma nsogbu m na-abịa na oyiri nke oge igwe na m mere na yosemite n'ihi na enweghị m ike ịgụ ma ọ bụ weghachite ya ihe ọ bụla ebe ọ bụ na maverick.
Zaghachi Marcelo Moreno
Enyi enyela m aka nke abuo pro pro so it bia na ulo oru ugwu lion ma achoro m ịhazi ya nsogbu m bu na ebe m amaghi onye nna m zutara ya, amaghi m ma ha ga aju m tinye apple id, ruo ugbu a etinyebeghị m mmemme ọ bụla ma achọrọ m ịkpụzi ya maka otu ihe kpatara ya na kọntaktị ya na-apụta na ngwa ahụ ma m ga-achọ ịmalite iji ya dị ka a ga - asị na m zụtara ya, m na - emeghachi ya abia na factory lion lion, o ga aju m maka apple id, biko nyere aka
Fidel Garcia kwuru dijo
My Macbook pro bu nke 2012 ma m zutara ya ohuru ma ya abia na yosemite arụnyere na ebe ọ dị ntakịrị nwayọ, m lere anya n'ụgbụ ahụ wee hụ mavericks na piratebay wee budata ya, ma ugbu a ọ bụ ụdị m bụ iji na ọ na-arụ ọrụ dị ukwuu, 300% ka mma karịa yosemite
Zaghachi Fidel Garcia
fidel garcia, biko ị nwere ike ịgafe m njikọ yosemite? Igwe m abiala na yosemite na achọrọ m ịnwe maverick maka nkwado ọdịyo ... ma ọ dịkwaghị na apple.store ... Enwere m olileanya na ị nwere ike inyere m aka .. mmakọ
Ndewo, agbasoro m usoro na mgbe ị na-etinye ọdụm, ọ na-agwa m na enweghị m ike ịwụnye ya n'ihi na e nwere nsụgharị ọzọ na disk. Ihe m na-eme?
Ndewo ndị mmadụ, a na m ajụ gị ajụjụ, ị ga-ama otu esi aga azụ na nsụgharị 10.10.4 (yosemite) na mbipute 10.6.8 na-enweghị efunahụ ozi ahụ, daalụ nke ukwuu. Ọ bụ 2001 imac
Ndewo, kedu maka m chọrọ ịjụ gị ajụjụ, enwere m mac book pro retina 2015, ọ bịara na yosemite ala! , na maka okwu nke ndakọrịta na mmemme ọdịyo Achọrọ m ịkwado ma kwaga na maverick, m ghọtara na ihe ọhụrụ kọmputa kọmputa chipset dakọtara naanị na osx el capitan ma ọ bụ yosemite, ọ bụ eziokwu?! ya mere enweghị m ike ịwụnye mavericks!? nke a na-ewetu m!
Enweghị m ike ịpinye iwu alt + R tupu mkpọtụ ụda mgbe ịmalitegharịrị na ihe niile pụtara ịmalite usoro ahụ
Patry, enwetaghị m alt na R ma mac m na - amalitekarị, ị chọtara azịza ya? Enwere m olileanya na enyemaka gị
Cheta na ọ bụrụ na ịchọrọ iweda OSX 10,9 ala. Ọ dị mkpa ịgbanwe ụbọchị nke kọmputa gị (kọmputa) na nke Maverick dị ugbu a (10,9) .. dịka ọmụmaatụ na 2014. ozugbo ị gbanwere ụbọchị gị ị nwere ike ịmalitegharị kọmpụta ahụ wee bido nrụnye maverick gị n'enweghị nsogbu.
Zaghachi Carlos Forero
Nwelite ohuru nke Telegram maka Mac v1.32